ခင်လေးငယ် : 2014
˙·••● Clouds and Waves ●••·˙ ‪Rabindranath‬ ‪Tagore‬
˙·••● တိမ်တိုက်များ နှင့် လှိုင်းကလေးများ ●••·˙ ‪
မေမေရေ ~~~ ☆彡
တိမ်တိုက်တွေရဲ့ ဟိုမှာဘက်ဆီက နတ်သားလေးတွေက သားကို လှမ်းခေါ်နေကြတယ်..။
“ငါတို့တွေက မိုးလင်းမိုးချုပ် ကစားတယ်.. ရွှေရောင်နေဝန်းကြီး နဲ့လည်း ကစားတယ်- ငွေရောင်လဝန်းကြီး နဲ့လည်း ကစားကြတာကွ..” တဲ့..။
“ဒါဆို ခင်ဗျားတို့ဆီ ကျွန်တော် ဘယ်လို လာရမှာလဲ..” လို့ သားမေးတော့ ---- သူတို့က.....
“ကမ္ဘာကြီးရဲ့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်း အစွန်းကိုလာ-
ကောင်းကင်ဆီမော့လို့ လက်နှစ်ဘက်ကို ဆန့်တန်း-
ဒါဆို တိမ်တွေဆီ မင်းကို သယ်သွားပေးမှာပေါ့......” ...............တဲ့...။
သား ပြန်ပြောလိုက်တယ် ------
“မေမေက ကျွန်တော့်ကို အိမ်မှာစောင့်နေရှာမှာ- မေမေ့ကို ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ဘယ်လိုလာနိုင်မှာလဲ...” လို့ပေါ့...။
အဲ့တော့ သူတို့က သားကိုပြုံးပြပြီး ဟိုးအဝေးကြီးဆီ လွင့်မျောသွားကြပါရော...!!
ဒီ့ထက် ကောင်းတဲ့ ကစားနည်း သား သိတယ် မေမေ ----
●●““ သားဟာ တိမ်တိုက်ကလေးသာဆို မေမေဟာ လမင်းကြီးပေါ့....!! သားလက်အစုံနဲ့ မေမေ့ကို နွေးနေအောင် ပွေ့ထွေးထားမယ် - သားတို့ အိမ်လေးရဲ့ အမိုးဟာ ကောင်းကင်ပြာကြီးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် - ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား.. မေမေ....”” ●●
☩.☩.☩ ☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩.☩ ☩.☩.☩.☩.☩.☩
လှိုင်းတွေရဲ့ ဟိုမှာဘက်ဆီက နတ်သားလေးတွေက သားကို လှမ်းခေါ်နေကြတယ်..။
“ငါတို့တွေက မိုးလင်းကနေ မိုးချုပ် တေးဆိုညည်းရင်း ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်မသိ ခရီးတွေ ဆင့်ကာဆင့်ကာသွား- ကစားကြတာကွ..” တဲ့..။
“ကျွန်တော် ဘယ်လို ဝင်ကစားရမှာလဲ..” လို့ သားမေးတော့ ---- သူတို့က......
“ကမ်းခြေရဲ့ ဟိုး အစွန်းကိုလာ-
ဒါဆို လှိုင်းတွေက မင်းကို သယ်သွားပေးမှာပေါ့......” ...............တဲ့..။
သား ပြန်ပြောလိုက်တယ် -----
“မေမေက ကျွန်တော့်ကို အိမ်မှာပဲ ရှိနေစေချင်တာဗျ- မေမေ့ကို ထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော် ဘယ်လိုလာနိုင်မှာလဲ...” လို့ပေါ့..။
အဲ့တော့ သူတို့ ပြုံးပြီး ကခုန်ရင်း ဟိုးအဝေးဆီ ထွက်သွားကြပါရော...!!
●●““သားဟာ လှိုင်းကလေးသာဆို မေမေဟာ ဆန်းကြယ်လှပတဲ့ ကမ်းခြေပြင်ကြီးပေါ့...!! သားက မေမေ့ရင်ခွင်ဆီ တစ်လိမ့်လိမ့် တိုးဝင်ရင်း မေမေ့နှုတ်ခမ်းဖြားမှာ ရယ်သံလွင်လွင်တွေလေးတွေ ဖန်ဆင်းပေးဦးမှာ - သားတို့ ဘယ်မှာရှိနေကြတယ် ဆိုတာ တစ်လောကလုံး ဘယ်သူသိနိုင်မှာလဲ - ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား မေမေ....”” ●●
တဂိုး၏ ချစ်စရာ စာစုလေးအား မြတ်နိုးသောရင်ဖြင့် ပြန်ဆိုပါသည်..။ (✿◠‿◠)
■ ခင်လေးငယ် ■ 2014/ 11/ 03
Posted by Khin Lay Ngel at 11/03/2014 06:15:00 AM No comments:
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ကောင်းကင်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ တိမ်တိုက်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ကြယ်ကလေး~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အကြီးမားဆုံး သစ်ပင်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ နေခြည်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ခြုံစောင်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ပြတင်းပေါက်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အဘိဓာန်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ မြတ်နိုးရာ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ လေပြေ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ မိုးစက်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ လရောင်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ပင်မ သွေးကြော~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ နေ့~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ည~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အလင်းရောင်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အတောင်ပံတစ်စုံ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အသိ ဥာဏ်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ဂစ်တာကြိုး ခြောက်ချောင်း~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ အပြုံးလေး~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ဆံနွယ်~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ၃၆၅~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ကဗျာ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မရဲ့ ကမ္ဘာ~
● ဖေဖေဟာ ကျွန်မ နှလုံးသားထဲက အနမ်းတစ်ပွင့် ။ ။
ခင်လေးငယ် ✿ 2013/ 07/ 16
ဖေဖေ မရှိတော့သော တစ်ဆယ့်ခွန်နှစ်နှစ်မြောက်နေ့ သို့ ရေးဖွဲ့ပါသည်..။
Posted by Khin Lay Ngel at 8/03/2014 12:57:00 AM 1 comment:
˙·••● လူသား မိုးစက် ●••·˙
တကယ်ဆို ကိုယ်ဟာ မိုးစက်လေးတွေရဲ့ တီးတိုးစကားဝိုင်းလေးကိုတောင် မပျက်စေချင်ခဲ့ သူရယ်..။ အဲ့ဒီလို သူတို့နေလာရင်း မိုးရေကွက်ကလေးအဖြစ် အဆုံးသတ်ခြင်းဟာ သူတို့တွေရဲ့ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးလို့ တွေးကောင်း တွေးနေနိုင်ကြတယ် မဟုတ်လား..!
ရုတ်ကနဲ လေဟာ ပရမ်းပတာ တစ်ဟုန်တိုး ကြမ်းရှလာခဲ့..။
လားရာ မတူမယ့် နေရာနှစ်ခုဆီ လွင့်သွားနိုင်တဲ့ မိုးစက်လေး နှစ်စက်ဟာ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ခွင့်မှ ရလိုက်ကြပါ့မလား..! “ဟင့်အင်း.. မလုပ်ပါနဲ့ သူတို့ စကားဝိုင်းလေး မပြီးပြတ်သေးဘူးလေ..”
ညည်းတွားစကားတောင် မဆိုလိုက်နိုင်ခင် လွင့်စင်ထွက်သွားကြပေါ့..။
ဆိုးလိုက်တာ..! လို့ ကောင်းကောင်းစွတ်စွဲနိုင်ခွင့် ရှိပေမယ့် ရပ်တန့်ဖို့အထိ ကိုယ်ဟာ တားမြစ်နိုင်စွမ်းမှ မရှိခဲ့ပဲကွယ်..။ အရာတိုင်းဟာ သူ့သဘောသူ ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ခပ်မွေ့မွေ့ဆောင်လို့..။
● ရပ်ပေးကြပါ အော်လို့ မရဘူး..။
● မလုပ်ပါနဲ့လို့ ဆွဲထားခွင့် မရှိဘူး..။
● ကိုယ် ဘယ်သူ့ကိုမှ နားချခွင့် မသာဘူး..။
လာခဲ့ကြခြင်းဟာ ပြန်ထွက်သွားဖို့ သက်သက်ပဲ...။ ထွက်ခွာသွားခြင်း ဟာလည်း ပြီးမြောက်သွားခြင်း မဟုတ်ဘူး..။ ပြန်လာရခြင်းဟာ အဆုံးမသတ်နိုင် ရှိနေဦးမှာ..။
ကိုယ့်လိုပဲပေါ့..!! သူတို့လည်း ငွေ့ရည်ဖွဲ့တည်ရခြင်းမှာ နှောင်တွယ်ချင်ကြဦးမှာပဲ..။ မိုးစက်တွေ အဖြစ်လည်း ပျော်ပျော် ရွာချင်ဦးမှာပဲ..။ ဆိုက်ပရာ့စ် ပင်ဖြားထက်က မိုးပေါက်လေး အဖြစ်လည်း တွယ်ဖက် ခိုကပ်နေချင်သေးရဲ့ မဟုတ်လား..။
မမြဲခြင်းမှာ ကိုယ်တိုင် ငြိတွယ်နေနေသေးသမျှ မမြဲခြင်းသာ အမြဲတည်ဆုံးတရား ရယ်လို့ ကိုယ်ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လို ပြောပြနိုင်မှာလဲ..! ဒီသံသရာထဲ တစ်ဝဲလည်လည်နဲ့ ဂျပ်အေး သူ့အမေရိုက်..။ ရိုက်လည်း ရိုက်ရိုက်ပဲပေါ့..။
ကိုယ်တို့တွေဟာ အပြန်အလှန် ချီးမွမ်းထောပနာ ပြုကြ လို့-- ဖြေသိမ့်ကြ၊ နှစ်သိမ့်ကြ လို့ရယ်--
“ဒါတွေ ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားလို့ရတာပေါ့...”
ကြေကွဲစရာတော့ အတော့်ကို ကောင်းတယ်ရယ်..။ ဖြေသိမ့်ခြင်းဟာ နွေးထွေးမှု ဆိုပေမယ့်.. ဖြေသိမ့်ခြင်းဟာ အဖြေမှန် မဟုတ်သေးဘူးပဲ...။
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်ဟာ သိယောင်ဆောင်ရင်း ဝေး..။ မိုးစက်လေးတွေလည်း သိဟန်ဆောင်ရင်း ဝေး..။ “တဟေးဟေး” နဲ့ ဝေးသထက် ဝေးနေကြတော့တာ..။
ဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ သာမန်လေး မြင်နိုင်နေခြင်း တောထူထူတွေထဲ......
နွံထနေလည်း ပျော်ပျော်ကြီး“မှား”- ဗွက်ပေါက်နေလည်း ပျော်ပျော်ကြီး“လား”- လို့ပဲ မဟုတ်လား..!
ကိုယ်ဟာ ဖြေတွေးလေးနဲ့ ခုထက်ထိ တောင်းဆုပြု ကြည့် နေပြန်သေးတာရယ်..။ မဟာ့ မဟာအမှားကြီးကို အထွေးလိုက် အပြုံလိုက် တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ခပ်တည်တည် ဆုပ်ကိုင်ရင်းပေါ့...
သိမ်မွေ့စွာပဲ ဖြစ်တည် နေနေပါရစေဦး ~
သိမ်မွေ့စွာပဲ တစ်ဖန် ဖြစ်တည် လာပါရစေဦး ~ ရယ်လို့
နောက်ထပ်--- နောက်ထပ်---- နောက်ထပ်ပေါင်း များစွာဆီ------
သနားစရာ သိပ်ကောင်းနေပြီ မဟုတ်လား..။ မလိုချင်တော့ဘူး ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် တပ်အပ်မသိ- မမြင်နိုင်သ၍- ဒီဆုတောင်းပဲ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ပဲ့တင်ထပ် ရတော့တာ..။
အို... ရှက်စရာ... ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွယ်..!
သူရူးတစ်ယောက်လို ခါးခါးသီးသီး ဟားတိုက် ရယ်မောချ ပစ်လိုက်ချိန်အထိ.. သိမ်မွေ့စွာ“ ကို ကိုယ်ဟာ ဖက်တွယ်ထားဖို့ ပျော်နေလိုက်သေး သတဲ့..။
တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ ရှက်တယ်” ရှက်တယ်” ညည်းတွားရင်း-
အရပ်လေးမျက်နှာမှာ ရှက်တယ်” ရှက်တယ်” အသံကောင်း ဟစ်အော်ရင်း-
သံသရာကို ဆွဲဆန့်နေသူ---------- ရှက်တယ်” လို့ လိမ်ညာသူ-------------
စစ်စစ်မှန်မှန် မရှက်တတ်သေးသူ မိုးတစ်ပေါက်သာ..။ ။
Posted by Khin Lay Ngel at 8/02/2014 05:56:00 AM No comments:
Tranquility (3) ~
တုပ်နှောင်၍လည်း မထား- အချည်နှောင်ခံ အဖြစ်နှင့်လည်း ရှိမနေပါ..။
ကျွန်မတို့၏ မလျော့မတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားသော လက်ဖဝါးနှစ်စုံ အကြားတွင် မြဲမြံသောအရာတစ်ခု ရှိသည်မှာ အတိအကျ..။ ထိုအရာကို စကားလုံးအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရပါလျင် အများက ကြိုး- ဟု ပမာပြု ကြပေလိမ့်မည်..။
ဟင့်အင်း... ဟု ကျွန်မ ငြင်းဆိုလိုပါသည်..!!
★☆★ ☆★☆ ★☆★ ☆★☆ ★☆★ ☆★☆
ညှိုးနွမ်း၍ သွေ့ခြောက်စပြုနေသော ပန်းကလေးတစ်ပွင့် အဖြစ်ကို မြင်မိသေး၏..။ ဝန်းကျင်တွင် ရှင်းသန့် ပါးလွှာသော လေထုမရှိ..။ တိမ်တိုက်တို့ မရှိ..။ မိုးသားတို့ မရှိ..။ ထို့ကြောင့် မိုးရနံ့ကိုမရ..။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် တစ်ရိပ်ရိပ် မြင့်တက်လာသော အားငယ်စိတ်နှင့် မိမိကိုယ်ကို လှောင်ပိတ်ထားသူ ပန်းတစ်ပွင့် ဖြစ်လာခဲ့သည်..။ ခန္ဓာ တစ်ကိုယ်လုံး ရဲရဲနီ သွေးညှီစတို့နှင့် အညစ်ကြေးတို့ ဖုံးအုပ်နေသည်ဟု သူ ထင်သည်..။ နုပါးလွှာတွင် နွေးပူသော မြစ်နှစ်စင်း တို့ကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် စီးဆင်းခွင့် ပေးခဲ့သူလည်း ဖြစ်သည်..။
ထိုပန်းကလေးသည် အတိတ်ကို လျှောက်သည်..။ အနာဂါတ်ကို ကြောက်သည်..။ ပစ္စုပ္ပန်ကို မကြည့်..။ ခဏတိုင်းကို မမြင်..။ သူ့အတွက် နေခြည်သည် မနွေး..။ လရောင်သည်လည်း မအေး..။ ပန်းကလေးသည် ထွက်ပေါက် မသိ၍ သော့ပျောက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ် ပါလိမ့်မည်..။ လောက၏ နာရီတို့သည်သာ တစ်ချတ်ချတ်နှင့် မြည်တွန်မြဲ မြည်တွန်လျက် အရှေ့သို့ ယွန်းသည်..။ သူသည်ကား အလျားအနံမဲ့၊ ကိုယ်ထည်မဲ့၊ ပုံသဏ္ဌာန်မဲ့၊ အရိပ်မဲ့ ရပ်မြဲရပ်လျက်သာ ရှိနေခဲ့၏..။
နေ့၊ ရက်၊ လတို့ အနည်းငယ် အရောင်ပြောင်းခဲ့ပါပြီ..။ ရပ်တန့်နေပါလျက် သွားခဲ့သည်ဆိုကြောင်းကိုမူ နည်းနည်း ရှင်းရခက်ပါလိမ့်မည်..။ ပန်းကလေး သူကိုယ်တိုင်ပင် သတိမူမိခဲ့ဟန်မတူ..။ မှုန်ပြအေးမြသော အလင်းတစ်စသည် ပန်းကလေးကို ကွက်၍ တစ်ခဏတာမျှ အုပ်မိုးသည်..။ ငိုက်မြည်းကျနေသော လည်တိုင်ကလေး မဆိုသလောက် မော့လာနိုင်သောအခါ ပန်းကလေးသည် ခပ်ဖျော့ဖျော့ ပြုံးရိပ်သန်း ခဲ့သည်..။ သူသည် ထိုအဖြစ်လေးကို တမြတ်တနိုး ရှိသွားခဲ့၏..။
ရပ်တန့်နေသမျှ ဖွေရှာခဲ့သော အလင်းရောင် မျှင်မျှင်လေးကို မြင်တွေ့ချိန်၌ သူ ချစ်သည်..။ တစ်ခဏတာတွင် ရှင်သန်နေထိုင်ခြင်း မပြုခဲ့သော အချိန်အချို့ကို နှမျောတသဖြစ်မိ၏..။ နောင်တရိပ် သန်းလာသောအခါ ပြန်လည်ညှိုး ကျတော့မယောင် ဖြစ်သည်..။ ထိုအဖြစ်ကို ပန်းကလေးသည် သိမ်မွေ့ ညင်သာစွာ ကိုင်တွယ်တတ်စ ပြုလာခဲ့ပြီ..။ အကြိမ်ကြိမ် ညွတ်ကျသွားသော လည်တိုင်အား ဖေးကိုင် ဦးမော့ပေးသူ အလင်းရောင်လေးကို “တစ်ခဏ” ဟု ပန်းကလေးက အမည်နာမပြု၏..။
လောက၏လမ်းများ ဟိုဟိုသည်သည်၌ ပြန်လည် လန်းဆတ်ကာစ ပန်းတစ်ပွင့်ကို မြင်တွေ့ရသည်..။ တစ်ရံတစ်ခါတွင် ဒူးညွတ်ကျသည်..။ ငွေ့ရည်ကြည်တို့နှင့် လျှံပြည့်လာသော မျက်ဝန်းများ ရှိသည်..။ စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှုတွေ ရှိသည်..။ တွန့်ဆုတ်တွေဝေမှုများ ရှိသည်..။ ဆွံ့အ ဝမ်းနည်း ပြန်သည်..။ နာမကျန်းသော ခန္ဓာ၌လည်း အရှုံးပေးမတတ် အားငယ်တတ်သေးသည်..။ အခါခါ ကျရှုံး၍ အခါခါ မောပန်းပြန်သည်..။
ထိုသို့သော အချိန်တိုင်း၌ သူချစ်မြတ်နိုးသော တစ်ခဏပေါ်သို့ တက်၍ရပ်သည်..။ ခဏလေးကို သိခြင်းသည် သူ၏ ဆေးဖြစ်သည်..။ ခဏလေးကို မြင်ခြင်းသည် သူ၏ ချမ်းမြေ့အေးမြမှု ဖြစ်သည်..။ ထို ခဏတာသည်ပင် ပန်းကလေး ကိုယ်တိုင်၏ အပြုံးအရယ် စစ်စစ်များ ဖြစ်လာတော့၏..။ ခဏလေးတိုင်းတွင် နေထိုင်ခြင်းဟူသော နေခြည်ဖြင့် သူ့ကိုယ်ကို လွှမ်းခြုံနွေးထွေးစေသည်..။ တစ်ခဏတွင် နေထိုင်ခြင်း လရောင်ကို သောက်ချိုးယူရင်း သူ့ကိုယ်သူ အေးမြစေသည်..။
သူသည် အလင်းတန်း မျှင်မျှင်လေးကို တမ်းတမ်းမက်မက် လိုက်လံဖွေရှာသူ မဟုတ်တော့..။ ကာလရှည်ကြာ မွတ်သိပ်မှုများ မရှိတော့..။ အလင်းကို တမ်းတ၍ အမှောင်ကို ကြောက်မနေတော့..။ တစ်ပါးနေရာဆီမှ အလင်းကို တောင်းခံ မျှော်လင့်သူ မဟုတ်တော့..။ ပန်းကလေး ကိုယ်တိုင်သည် အလင်းရောင်ဖြစ်ခဲ့ပြီ..။ ခဏတာဆိုသည့် ပန်းရထားပေါ်၌ လိုက်ပါ စီးနင်းရင်း လောကခရီးထဲ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ တိုးဝင်သူ ဖြစ်ခဲ့ပြီ..။ ထိုရထားပေါ် ရောက်နှင့်နေပြီးသား ခရီးသည်အားလုံးကိုလည်း ကြည်လင်လှပစွာ သူပြုံးပြနိုင်ခဲ့လေပြီ..။ အတိတ်တွင် ထင်ကျန်ရစ်ခဲ့သော ဒုက္ခအရိပ်ဆိုး အသွင်သဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးတို့ကို ပိတ်ကားထက်၌် ကြည့်နေသကဲ့သို့ သူ ပြန်ကြည့်တတ်ခဲ့ပြီ..။
ပန်းသည် ပွင့်ခြင်း၌ အဆုံးရှိလား..! ကြွေလွင့်ခြင်း၌ အဆုံး ရှိပါသလား..!! ကိုယ်တိုင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အမေးပြုခဲ့သော ထိုမေးခွန်းကို သူ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်တော့သည်..။ ပန်းတစ်ပွင့်၏ ဘဝခရီး၌ ပွင့်ခြင်း ကြွေလွင့်ခြင်း အားလုံးသည် ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်တို့၏ သဘာဝမျှသာဖြစ်ကြောင်း သူသိခဲ့ပြီ..။ ပွင့်လန်းခြင်းနှင့် ကြွေလွင့်ခြင်းအကြား တစ်ခဏတိုင်း၌ ပေါ့ပါးလွတ်မြောက်စွာ သူ နေထိုင်တတ်ခဲ့ပြီ..။ ဤသို့ နေထိုင်ခြင်းသည်သာ ဟိုမှာဘက်ကမ်းအတွက် အခရာကျသော သော့တစ်ချောင်း ဖြစ်ကြောင်း လည်း ပန်းကလေး ကောင်းစွာ နားလည်သွားပြီ ဖြစ်၏..။
★☆★ ☆★☆ ★☆★ ☆★☆ ★☆★ ☆★
~ မာရေးသျှင် ~
ကျစ်လျစ်လှပသော ထိုကဗျာတိုလေးကို ကျွန်မချစ်သော အစ်ကိုတစ်ဦးထံမှ လက်ဆောင်အဖြစ် ရခဲ့ဖူးသည်..။ ထိုခဏ၌ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာနှင့် ကျေကျေနပ်နပ်လေးပင် ကျွန်မပြုံးခဲ့၏..။ ခဏတိုင်း၌ အရိုးရှင်းဆုံး သက်ဝင်လှုပ်ရှား နေထိုင်လျက်ရှိသော ဘဝလက်တွဲဖော် မောင့်ကိုလည်း ထိုခဏလေးများနှင့် အတူ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကျွန်မရခဲ့သည်..။ အင်မတန် ရိုးရှင်းလှပါသည်..။ ကျွန်မတို့၏ ဆုံဆည်းရာသည် “ခဏလေးများ” သာ ဖြစ်၏..။
ကျွန်မနှင့် မောင်သည် ချည်နှောင်မထားပါဘဲ မြဲမြံသည်..။ တုပ်နှောင်မထားသော်ငြား တင်းကျပ်စွာ ရှိနေသည်..။ ကျွန်မတို့၏ မလျော့မတင်း ဆုပ်ကိုင်ထားသော လက်ဖဝါးနှစ်စုံ အကြားတွင် မြဲမြံသောအရာတစ်ခု ရှိသည်မှာ အတိအကျ..။ ထိုအရာကို စကားလုံးအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရပါလျင် အများက ကြိုး- ဟု ပမာပြု ကြပေလိမ့်မည်..။
တုပ်နှောင်၍လည်း မထား- အချည်နှောင်ခံ အဖြစ်နှင့်လည်း ရှိမနေ..။ ကျွန်မတို့ကို မြဲမြံစေသော တင်းကျပ်စေပါသော ထိုအရာသည် ကြိုးတစ်ချောင်း မဟုတ်ပါ..။
ကြည်လင်အေးမြသော၊ ပေါ့ပါးရှင်းသန့်သော၊ ခိုင်မာကျစ်လျစ်သော၊ ပကတိ မြဲမြံသော၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော၊ လွတ်လပ်ဖြူစင်သော “တစ်ခဏလေး” များသာ ဖြစ်၏..။
★ ခင်လေးငယ် ::: 2014/ 05/ 18 :::
Posted by Khin Lay Ngel at 5/18/2014 04:33:00 AM No comments:
“ပိတောက်၊ ကျီးကန်း၊ ချယ်ရီ၊ ပန်းနုရောင်၊ ဝိဉာဉ်၊ နာရီ၊ ကော်ဖီ၊ ငြိမ်ဆိတ်ခြင်း..”
ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ နာရီသံချပ်ချပ်အောက်က ညမှာ
တိတ်တဆိတ် ငါ့ကို သောက်ဖို့ အရောက်လာခဲ့သတဲ့..။
ငါ့လိပ်ပြာက တခမ်းတနား ပြင်ဆင်တုန်း
အိပ်မက်မှာ ဝိဉာဉ်ခေါ်သံ သဲ့သဲ့ လှုပ်တယ်..။
မဖြစ်စလောက် ပန်းနုရောင်သန်းယုံလေးသန်းတဲ့ ချယ်ရီပွင့်လွှာတွေထက်
ဖွဖွနင်းချလိုက်ဖို့ အားငယ်နေတုန်းလား မာရီယာ..?
မင်းလည်း “မင်း” မဟုတ်ဘူး ဆွေးမနေနဲ့တော့ မာရီယာ
ငါလည်း “ငါ” မဟုတ်ခဲ့တာ ရှင်းပြဖို့ နည်းနည်းခက်ဦးမယ်..။
အားလုံးဟာ အတူပါမလာတဲ့ နာမ်စားတွေနဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားတွေ သက်သက်
ငါတို့ လက်တွေမှာ ဗလာ
ဒါ လွမ်းစရာမှ မဟုတ်တာ..။
မကြာခင်ပဲ ကျီးတွေ အာတော့မယ်..
ခင်လေးငယ် :: 2014/ 04/ 16 ::
Posted by Khin Lay Ngel at 4/18/2014 02:51:00 AM No comments:
Posted by Khin Lay Ngel at 4/01/2014 07:34:00 PM 1 comment:
ခင်လေးငယ် :: 2014/ 03/ 18 ::
Posted by Khin Lay Ngel at 4/01/2014 04:30:00 PM No comments:
“ If we know how to breath, no one will steal our peace.”
မုန်တိုင်းရယ် ထန် ဒီရေက မာန်ကြွ
ဟိုနေရာ တို့တို့ ဒီနေရာ ထိထိ
ကလိတိတိ မြားမိုးတို့ သည်းရွာတော့
ကွယ်~~ လာစမ်းဟဲ့..!! တဲ့
မောင်က ရင်ကော့ ကျွန်မ ခေါင်းမော့လို့
လမ်းဟာ ကြမ်းချင်တိုင်းလည်း ကြမ်းခဲ့တယ်..။
ခြေတစ်လှမ်းချင်း သတိပန်း ချခင်း
ခဏတိုင်းမှာ ဖွဖွနင်းရင်း ဆက်လျှောက်တယ်..။
ကြည်လင်စိတ်နဲ့ မျက်လွှာတို့ မှိတ်လို့...
အလင်းထံစူးစိုက် မြတ်နိုးစွာ ဦးခိုက်ရင်းပဲ
တိတ်တဆိတ် လှမ်းလျှောက် နေကြဆဲ..။
ခင်လေးငယ် :: 2014/ 03/ 06 ::
with my Beloved Husband..!! ♥♥
Posted by Khin Lay Ngel at 4/01/2014 03:41:00 PM No comments:
:::::::::::::::: (၁) ::::::::::::::::
အခန်း နံပါတ် တစ်ဆယ့်သုံး..!! စေ့ယုံလေး စေ့ထားတဲ့ တံခါးကို ဖွဖွတွန်း ဝင်လိုက်တယ်..။ အပြုံးတစ်ချက် လက်ကနဲ ထတောက်သွားတာ မှန်တစ်ချပ်မှာ မြင်လိုက်ရသလိုပဲ..။ မျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးကာမှ မှန်ချပ်ထဲကို စူးစူးစိုက်စိုက် ပြန်ကြည့်တော့ မရှိတော့ဘူး..။ အဝိုင်းလိုက် ရှိနေတဲ့ ရှတတ မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ ပိပိရိရိ အနားသပ်သွားတဲ့ “ဟက်..” ဆိုတဲ့ ရယ်သံတစ်စ အဲ့ဒီမှန်မှာ တွေ့တယ်..။ တကယ့် ခဏလေးပဲ..။ ပြီးတော့ ပျောက်သွားတယ်..။
:::::::::::::::: (၂) ::::::::::::::::
ကဗျာမဆန်လိုက်တာကွယ်..! လေတိုးသံသဲ့သဲ့က သွဲ့သွဲ့ညင်သာ ဝေ့ဝဲနေပါလျက် ခပ်ပြင်းပြင်း လှမ်းခေါ်သံက စောင့်ကြီးအောင့်ကြီး နိုင်တယ်..။ “ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် တစ်ဆယ့်သုံး..” တဲ့..။ အလုံပိတ် အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာ မဟုတ်ဘူး..။ အရိုင်းဆန်ဆန် စိမ်းညို့နေတဲ့ တောအုပ်ပဲ..။ သူ့သဘောသူဆောင်တဲ့ အစိမ်းရင့်ရင့်တွေက ဝေ..။ အနားဖျားတွေ ကော့လိပ်တွန့်ကြေနေတဲ့ မညီမညာ ညိုဝါဝါတွေလည်း ကြွေလို့..။
စိမ်းလဲ့ခြင်းနဲ့ ညိုခြောက်ခြင်းတို့ရဲ့ ကြားခံဟာ ပါးပါးလွလွ ခဏလေးပဲ မဟုတ်လား..။ မီးခိုးရိပ် ကောင်းကင်ဟာ နီကျင်ကျင်နိုင် လာတယ်..။ တောတောင်ထဲမှာ ကြည့်မှန်တစ်ချပ် ထောင်ထားတာ မြင်ရတယ်..။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ မှန်ကျယ်ကြီး တစ်ချပ်ရှိနေတာ သဘာဝ မကျဘူးလို့ ရှင်တို့ ထင်သလား..! မယုံ မရှိကြစမ်းပါနဲ့..။
ခပ်မတ်မတ် ခန္ဓာနဲ့ မျက်လုံးတွေကို ပြေလျော့လျော့ မှေးစင်းထားတဲ့ သန္တာန်..။ ဒီလို မူဟန်ကို ပိုင်ဆိုင်သူ ဘယ်သူမို့လဲ..? ပိုင်ရှင် မရှိဘူး..။ ကိုယ်တိုင်လည်း မပိုင် ဘယ်သူမှလည်း ပိုင်ဆိုင်မှု ပြုလို့မရ..။ ဒါကိုများ တစ်ဆယ့်သုံး အရှေ့မှာ “ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်..” တဲ့..။ ဘယ်လောက် အပေါစားဆန်သလဲ..! ဘယ်ရင်အုံထဲ ဆစ်ကနဲ တစ်ချက် အောင့်ထင်ရဲ့..။
မှန်ချပ်ထဲကို စောင်းငဲ့ကြည့်ချင်လာတယ်..။ စိတ် (ဒါမှမဟုတ်) ခန္ဓာအင်အား ဘယ်လောက် သုံးရမှာပါလိမ့်..!
နှစ်ခုလုံး ထည့်တွေးဖို့ လိုမလို ဘယ်သူမှ ပြဌာန်းမထားဘူး မဟုတ်လား- လို့ ခပ်ရွတ်ရွတ်တွေးတယ်..။ ကွဲကွဲပြားပြား ရှိနေပါလျက် သဲကွဲဖို့ ဝေဝါးနေတာ ရှက်ဖို့ သိပ်ကောင်းတာပဲ..။
:::::::::::::::: (၃) ::::::::::::::::
“ဟယ်လို..” ဆိုတဲ့ ဖြူဖျော့ဖျော့ အသံတစ်စသာ မှန်ထဲမှာ ဖြတ်ပြေးသွားတာ မြင်ရမယ်..။ ခဏလေးနဲ့ ရိပ်ကနဲ ပျောက်သွားတာလည်း တွေ့ရမယ်..။ မယုံ မရှိစမ်းပါနဲ့..။ ကျန်တဲ့အရာတွေ ဘာမှ မရှိဘူး..။ တစ်ဆယ့်သုံး ဆိုတာလည်း ရှိမနေဘူး..။ မှန်တစ်ချပ်ပဲ တစ်ကယ်ရှိတယ်..။ သဘာဝလည်း ကျတယ် ဆိုတာပဲ..။
:::::::::::::::: (၄) ::::::::::::::::
ခင်လေးငယ် :: 2014/ 03/ 08 ::
Posted by Khin Lay Ngel at 4/01/2014 03:29:00 PM No comments: